भगवानले हामि सबैको रक्षा गरुन ! हेर्नुहोस् मंसिर २१ गते आइतबारको राशिफल -
भगवानले हामि सबैको रक्षा गरुन ! हेर्नुहोस् मंसिर २१ गते आइतबारको राशिफल
आज श्री शाके १९४२ बि।स।२०७७ साल मंसिर २१ गते आइतबार इश्वी सन २०२० डिसेम्बर ६ तारीख मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष षष्ठी तिथी अश्लेषा नक्षत्र ऐन्द्र योग भद्रा करण चन्द्रमां कर्कट राशिमा १२ः३९ बजे सम्म पश्चात सिंह राशिमा आनन्दादि योगमा वज्र योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु ९ज्यो।प।सरोज घिमिरे०
मेष राशि ९चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ० अप्रिय खवरको श्रवणले मनमा सामान्य चिन्ता प्राप्त रहने दिन रहेकोछ । मान्यजनको स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्नहुन सक्नेछ । मध्यान पश्चात भने अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आम्दानि मध्यम रहला । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला ।
बृष राशि ९इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो० मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य सम्पादित रहनेछन । यात्राकारक समय रहेकोछ । अरुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । मध्यान पश्चात मानसम्मानमा आधात पर्नसक्ने सम्भाबना रहेकोछ । पारिवारिक स्वास्थमा समस्या उत्पन्न हुनसक्नेछ । नोकरीमा उन्नति मिल्नेछ ।
मिथुन राशि ९का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह० स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । तपाईको कार्य सम्पादनको श्रेय अन्य ब्यत्तिहरुलाई सहजै प्राप्त हुनेछ । यात्रा झन्झट पुर्ण रहन सक्छ ।
कर्कट राशि ९हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो० मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगले समय ब्यतित रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । समयको सहि सदुपयोग गर्न नसक्नाले कार्य क्षेत्रमा साधारण ढिलाई भोग्नु पर्नेछ । आफन्तजन हरुको साथ सहयोगको कमि महसुस हुनेछ ।
सिंह राशि ९मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे० कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन तनाब पूर्ण ब्यतित रहला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । पारीवारिक भेटघाटको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । ब्यापार ब्यवसायमा आफ्नो प्रभुत्व रहनेछ ।
कन्या राशि ९टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो० आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फेला परेतापनि मानसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यवधान आई पर्नेछ । अध्यन अध्यानपनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । आँट शाहसमा कमि आउनाले कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । सहयोगी ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले मनमा आघात पुग्नेछ ।
तुला राशि ९र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते० सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहगायीता साथै सामान्य मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । मानसिक चन्चलताले सताउनेछ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला ।
बृश्चिक राशि ९तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु० यात्राका क्रममा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । नजिकका मित्रजनहरुसगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ ।
धनु राशि ९ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे० स्वास्थ सम्बन्धी समस्याका कारण सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । मान्यजनको मार्गदर्शन अबलम्बन गर्नाले भाग्योदयको बाटो देखा पर्नेछ । आजको कार्यले भोलिलाई फाइदा रहनेछ । सामान्य शकां उपशकांहरुको निबारण हुने दिन रहेको छ ।
मकर राशि ९भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि० शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्नहुन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । मानसीक चन्चलताले कार्य क्षेत्रमाझन्झट आई पर्नेछ । सामान्य बादबिवादको सामना गर्नु पर्ला । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ ।
कुम्भ राशि ९गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द० तपाईको कार्यमा त्रुटि देखाउनेहरुको बृद्यिहुनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । यात्रामा सामान्य झन्झट आईपर्न सक्नेछ । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ ।
मीन राशि ९दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि० अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना समेत रहेकोछ । तपाईको कार्य बाट फाईदा लिनेहरुको सङख्यामा बृद्यि हुनेछ । आटशाहसको बृद्यिहुने योग रहेको छ ।
Previous ३ दशकदेखि साङ्लोले बाँधेर राखिएका इमानसिंहको उद्धार
Next भोलि रमेश प्रसाईको बिहे , चरित्र ह*त्या गर्नेलाई यसरी गर्दै कार*बाही(भिडियो)